Ijaarsa hidha guddichaa %65 qaqqabe harka harkaan
Hidhi Guddicha Haaromsa Itoophiyaa otoo maqaa kana hinqabaatiin dura, "Hidha Miliniyeemii" jedhamuun Bitootessa 24 bara 2003 ministira muummee biyyattii wayita sana turaniin dhagaan bu'uuraa kaa'amuun ijaarsisaa eegalame.
Ijaarsi hidhichaa hirmaannaa lammiilee biyyattii hundaatiin geggeeffamaa jiru kun Wiixata darbe waggaa 7fa itti eegalame mataduree, “Hidhi haaromsaa keenya yeedaloo wajjummaa haaromsa keenyaa” jedhuun bakka qondaaltonni mootummaa olaanaan, dippiloomaatonni, abbootiin amantiifi keessummoonni adda addaa argamanitti Naannoo Beenishaangul Gumuzitti kabajameera.
Ijaarsi hidhichaa gama ce'umsa beekumsaafi teknolojiitiin faayidaa guddaa argamsiisaa jiru kun xumuramee bu'aasaa akka dhamdhamamuuf hirmaannaan qaamolee gara garaa ammas daran akka barbaachisuudha ayyaanicharratti kan ibsame.
Ijaarsi hidhichaa waliigalaan harka 65 irra gahuu kan eeran Raawwachiistuun Hojii Humna Elektirikii Itoophiyaa, Injiinar Azeeb Asnaaqaa, pirojektiin hidha muummeerraa fageenya kiiloo meetira 1.4 irratti ijaaramaa jiru daddabarsi humnaa abbaa kiiloo vooltii 500 guutummaatti xumuramuusaati kan himani.
Ijaarsi yunitiiwwan dursanii humna maddisiisuu eegaluuf jedhan lamaas guutummaatti xumuramanii hojiileen dhaabbii raawwatamaa akka jiranis eerameera. Ijaarsa yunitiiwwan biroo 14fis qophiin taasifamaa jira. Lafti hektaara kuma 123 bishaan irra ciisus qophaa'eera.
Hidhi guddichi ijaaramaa jiru waliigaltee biyyaalessaa uumuu bira taree pirojektii qabsoo hiyyummaarratti taasifamu kan cimse waan ta'eef, xumuramee bu'aasaa akka dhamdhamnuuf hirmaannaan keenya kan yeroo kamuu caalaa barbaachisaadha.
Xiyyeeffannaa olaanaa mootummaan humna elektirikiif kenneen pirojektonni danuun guddina dinagdee biyyattii si'eessan qophaa'anii hojjetamaa jiru. Keessumaa hidhi guddichi fedhii humna elektirikii dabalaa dhufe keessummeessuuf gumaacha olaanaa qaba.
Hidhi haaromsaa fedhii humna elektirikii biyyattii guutuu bira darbee pirojektii ardii, fedhii biyyoota Afrikaa bahaallee guutuufi eegumsa naannawaa keessatti shoora olaanaa qabuudha.
Kana malees hidhichi pirojektii ibsituu tokkummaa ummatoota biyyattiiti. Pirojektichi imala Itoophiyaan biyyoota Afrikaa bahaa humna elektirkiitiin walitti hidhuuf eegalte dhugoomsuuf gumaacha guddaa qabaata.
Ijaarsi hidhichaa hirmaannaa lammiilee biyyattiitiin adeemsifamaa jiru hanga xumuramee tajaajila elektirikii kennuun fedhii gama kanaan jiru guutuuf gahutti qooda fudhannaan mul'ataa ummata bira jiru ammas ho'inasaa eeggatee ittifufuu qaba.
Lammiin guddina dinagdee biyyasaa fedhu marti gara waan facaafne hammaachuutti siqaa akka jirru hubachuun harka walqabannee fiixa bahiinsa ijaarsa hidhichaa ammaan tana harka 65 jiruuf haala amma itti jirru caalaatti gumaacha keenya cimsinee itti haa fufnu.
Torban kana/This_Week 4334
Guyyaa mara/All_Days 1641929